जनसंख्याको १.४ प्रतिशतले लगाए कोरोनाविरुद्ध खोप | Chhinchhin Khabar
जनसंख्याको १.४ प्रतिशतले लगाए कोरोनाविरुद्ध खोप
काठमाडौं–नेपालमा कुल जनसंख्याको १.४ प्रतिशतले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् । अहिलेसम्म चार लाख २९ हजारबढीले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जानकारी दिएको छ । माघ १४ गतेबाट सुरू भएको खोप अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा एक लाख ८५ हजार आठ सय ६५ जनाले कोरोना खोप लगाएका थिए । दुई लाख २१ हजार सात सय ११ जनालाई लगाउने लक्ष्य लिइए पनि ८५.४० प्रतिशतले खोप लगाएको विभागले जनाएको छ ।
पहिलो प्राथमिकताको दोस्रो चरणमा दुई लाख ८५ हजार आठ सय ८७ जनालाई खोप दिइने लक्ष्य लिइएकोमा ८४.०८ प्रतिशतले खोप लगाएका थिए । फागुन १० गतेसम्म नेपालको कूल जनसंख्याको १.४ प्रतिशतलाई खोप दिइएको विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्दरमण सिंहले बताए । देशको जम्मा जनसंख्या तीन करोड तीन लाख ७८ हजार ५५ जनामध्ये १.४ प्रतिशतले फागुन १० गतेसम्म खोपको पहिलो डोज लगाएको उनले बताए ।
फागुन २३ गतेबाट ५५ वर्ष माथिकालाई लगाइने
सरकारले भारतबाट १० लाख डोज खोप किनेर ल्याएको छ । यसअघि भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज खोप फ्रन्टलाइनरलाई लगाइएको थियो । अब किनेर ल्याएको १० लाख डोज खोपबाटै ५५ वर्ष माथिको उमेर समूहका लागि दिइनेछ । झण्डै ३७ लाख जनसंख्या रहेको उक्त उमेर समूहलाई कति दिनसम्म लगाउने भन्ने अहिले नै यकिन गर्न नसकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्‍वर गौतमले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका आधारमा मात्र खोप लगाउने काम भइरहेको गौतमले बताए ।
Previous articleमाटोबारे जानकारी दिने डिजिटल ‘सोइल म्याप’ सार्वजनिक
Next articleभागरथी हत्या अनुसन्धानमा संलग्न दुई प्रहरीको बढुवा
आन्दोलन अझै सशक्त बनाउने राजेन्द्र महतोको चेतावनी
वायुसेवा निगमले आफ्नो इन्धन आफै ल्यायो
कोरोनाको संक्रमणले नेपालमा १४० को मृत्यु